Lisk စျေး - အွန်လိုင်း LSK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Lisk (LSK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Lisk (LSK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Lisk ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $171 304 724.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Lisk တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Lisk များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
LiskLSK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.39LiskLSK သို့ ယူရိုEUR€1.19LiskLSK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.07LiskLSK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.28LiskLSK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr12.57LiskLSK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.8.84LiskLSK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč31.07LiskLSK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł5.23LiskLSK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.86LiskLSK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.96LiskLSK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$31.25LiskLSK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$10.79LiskLSK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$7.49LiskLSK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹104.1LiskLSK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.235.7LiskLSK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.91LiskLSK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.13LiskLSK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿43.32LiskLSK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥9.67LiskLSK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥148.53LiskLSK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1651.2LiskLSK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦540.34LiskLSK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽102.17LiskLSK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴38.58
LiskLSK သို့ BitcoinBTC0.000123 LiskLSK သို့ EthereumETH0.00373 LiskLSK သို့ LitecoinLTC0.0261 LiskLSK သို့ DigitalCashDASH0.0162 LiskLSK သို့ MoneroXMR0.0162 LiskLSK သို့ NxtNXT114.95 LiskLSK သို့ Ethereum ClassicETC0.209 LiskLSK သို့ DogecoinDOGE414.35 LiskLSK သို့ ZCashZEC0.0175 LiskLSK သို့ BitsharesBTS54.92 LiskLSK သို့ DigiByteDGB47.61 LiskLSK သို့ RippleXRP5.03 LiskLSK သို့ BitcoinDarkBTCD0.049 LiskLSK သို့ PeerCoinPPC4.69 LiskLSK သို့ CraigsCoinCRAIG647.4 LiskLSK သို့ BitstakeXBS60.58 LiskLSK သို့ PayCoinXPY24.8 LiskLSK သို့ ProsperCoinPRC178.26 LiskLSK သို့ YbCoinYBC0.000764 LiskLSK သို့ DarkKushDANK455.59 LiskLSK သို့ GiveCoinGIVE3072.3 LiskLSK သို့ KoboCoinKOBO323.7 LiskLSK သို့ DarkTokenDT1.28 LiskLSK သို့ CETUS CoinCETI4099.9
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 06:40:02 +0000.